88 New Generation Students: 8888
Buddhist monks who participated in the “2007” Saffron Revolution attend the 24th anniversary of the “8.8.88” pro-democracy uprising at the Tawwin Hninzi Restaurant in Rangoon on Wednesday, August 8, 2012. Photo, Mizzima
၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ရန်ကုန်မြိုတော်ခန်းမရှေ့ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်းပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ! သူတို့ ,သမိုင်းတွေကို ဘာကြောင့် ဖျက်ဆီးချင် ထိမ်ချန် ဖုံးကွယ်ချင် လိမ်ညာချင် နေရတာလဲ ! ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး အပါအ၀င် သမိုင်းဖြစ် စဉ်တွေထဲမှာ ကြက်သီး မွှေးညှင်း ထလောက်အောင် စိတ်ဓါတ် တက်ကြွ အားကျ အတုယူ စရာကောင်းတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ပြည်သူတွေရဲ့ ရဲရင့်မှုတွေ ၊ တောက်ခေါက် ဒေါသထွက် မချိတင်ကဲဖြစ် ၊ ခံပြင်း နာကျည်း သွားစေမဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ရက်စက် ယုတ်မာမှုတွေ ၊ အပြစ်မဲ့လက်နက်မဲ့ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေ ရဟန်း သံဃာတွေကို စစ်မြေပြင် တခုလို နံပါတ် တုတ်တွေနဲ့ ရိုက် ၊ ဘက်နက်နဲ့ထိုး ၊ သေနတ်နဲ့ပစ်၊ စစ်ကြောရေးစခန်းနဲ့ အကျဉ်းထောင် တွေထဲမှာ ရက်ရက် စက်စက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်လုပ်နေတဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာ သွေးအလိမ်းလိမ်းမြင်ကွင်းတွေ ရှိနေပြီး သူတို့ကို အစဉ်သဖြင့် စိတ်ခြောက်ခြား နေစေလို့ပါ ။ သမိုင်း တွေကို ပြည်သူတွေပြန်အမှတ်ရနေရင် ၊ နောင်လာ နောက်သားတွေ သိရင် မတရားသဖြင့်အနိုင်ကျင့်ရယူထားတဲ
့ သူတို့ အာဏာ ကုလားထိုင်ကို ကိုင်လှုပ် လာနိုင် တယ်လို့ အမြဲတမ်း တွေးကြောက် နေတာကြောင့် သမိုင်းတွေကို ဖျောက်ဖျက်လိမ်ညာ ထိမ်ချန် ဖုံးကွယ် နေတာပါ ။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးကို စကားလုံး အရ အမျိုးမျိုး ပြောကြပါတယ် ၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အရေးအခင်း ၊ ၁၃၅၀ပြည့် အရေးတော်ပုံ ၊ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် သပိတ်တိုက်ပွဲ စသဖြင့် ပြောကြပြီး ၊ နောက်ပိုင်းမှာ အရေးအခင်း ဆိုတဲ့ စကားလုံးက န၀တလို စစ်အာဏာရှင်တွေက တန်ဘိုး ပေါ့သွားအောင် သုံးတာ ၊ သာမန်ဆန်တယ် ၊ အရေးတော်ပုံ ဆိုတာက အကြောင်းရာကြီး ဖြစ်တယ်နဲ့ ပြောကြရင်း နောက်ပိုင်းတော့ရှစ်လေးလုံးအရေး
တော်ပုံကြီးလို့ပဲ အားလုံးကအသိ အမှတ်ပြု သုံးနှုန်းခဲ့ကြပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ဗမာ့ သမိုင်းရော ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာပါ အံ့သြ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ ဘာသာစုံ ၊ လူမျိုးစုံ ၊ အလွှာစုံ ၊ လူထု အုံကြွမှုကြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဗမာ နိုင်ငံနေရာအနှံ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်
ဆိုတာနဲ့ အဲဒီအုံကြွမှုကြီးကို ကျောင်းသားတွေ အသေခံ ဦးဆောင် ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်း ဖြစ်ရပ်တွေကို နောင်လာနောက်သားတွေ အမှန်အတိုင်းသိရှိကြဘို့က အဓိကဖြစ်ပါတယ် ။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပေါ် လာစေတဲ့ ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ အဓိက, က အဲဒီ အချိန်မှာ နှစ် ၄၀ သက်တမ်း ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ထဲက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း စစ်မီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဦးနုနဲ့ ဦးနေ၀င်း အပါအ၀င် တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ် ခဲ့သူတွေက ပြည်သူတွေ အပေါ် စေတနာ မမှန်ခဲ့ဘူး ၊ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ၊ အဖွဲ့စည်းတွေကို မျှမျှ တတ ဆွေးနွေး ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ရမဲ့ အစား စစ်ပွဲတွေကိုပဲ ဖန်တီး မွေးမြူပြီး နိုင်ငံ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေကို စစ်သုံး စရိတ် ခေါင်းစဉ်တွေပြ ၊ ကိုယ့်မိသားစု ကြွယ်ဝ ချမ်းသာရေးတွေပဲ လုပ်ခဲ့ကြလို့ ၊ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်း
၀င် လို့ဖြစ်လာတဲ့ အထိ ပြည်သူတွေ ဖွတ်ဖွတ် ညက်ညက်ကျေ မွဲတေစေခဲ့တာကြောင့်နဲ့ ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ကိုယ်ကျိုး စီးပွားရှာ အဂတိ လိုက်စားမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဥပဒေမဲ့မှု ၊ မတရားအနိုင်ကျင့်မှုတွေ အောက်ခြေ အဆင့် အာဏာပိုင်တွေအထိ အဆင့်ဆင့် ကျူးလွန် လာခဲ့ ကြတာကြောင့် ပြည်သူတွေ မျိုသိပ် ခံစားခဲ့ရတဲ့ နာကျည်းမှုတွေက ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး အဖြစ် ပေါက်ကွဲ ထွက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ထဲမှာ နေ့စဉ်လို တရား ဟောပွဲတွေ ရှိလာပြီး ကျောင်းသားတွေ ကြားထဲ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ရှိခဲ့ဘူးတယ် ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရတာ ကြောင့် ကျောင်းသား အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံး နေရတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုး ခံစား သိရှိ လာကြပါတယ် ၊ “ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေး-ဒို့အရေး ၊ ဖမ်းဆီး ကျောင်းသား ပြန်လွတ်ရေး -ဒို့အရေး” ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ ဆန္ဒပြ ချီတက်လာတဲ့ ကျောင်းသားအုပ် (အများစု အထက်တန်း ကျောင်းသားတွေ)နဲ့ လုံထိန်း တွေရဲ့ရိုက်ပွဲ (ဇွန်၂၁ မြေနီကုန်း)ဟာ ပြည်သူ တွေပါ ပါဝင်လာစေတဲ့ ကျောင်းသား အရေးအခင်းကနေ လုထုအရေးအခင်းကိုကူးပြောင်းသွား
အဲဒီလို ကျောင်းသားထု လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်တွေကနေ ရှစ်ဂဏန်း လေးလုံးစုံတဲ့နေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လူထု လူတန်းစား အသီးသီးက မဆလ (တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်)ကိုဖြုတ်
ချကြရအောင်ဆိုတဲ့ ကြေငြာချက်တွေ ၊လှုံ့စော်စာတွေ ပေါ်ထွက် လာပြီးတဲ့နောက် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးလို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မတရားမှုတွေများ လွန်းလို့ ဆင်းရဲ မွဲတေလွန်းလို့သာ ဆန္ဒပြ အုံကြွခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေ(အများစု)က နိုင်ငံရေး နားလည်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာတွေ တောင်းဆို ရမလဲတောင် မသိကြပါဘူး ၊ နေ၀င်းနဲ့ မဆလ အစိုးရ ပြုတ်ကျဘို့ပဲ သိကြတာပါ ။ အဲဒီ အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်စိန်လွင်(1962 ၊7July ကျောင်းသား သတ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းမှုး)သမတဖြစ်ေ
နတော့ “ဆန်တပြည် ၁၅ကျပ် စိန်လွင် ခေါင်းကိုဖြတ် ” “ဆန်တပြည် ၁၅ပြား နေ၀င်း သေမှစား” “စိန်လွင် ခြောက်တန်း တစောက်ကန်း စောက်ရမ်း မလုပ်နဲ့” ဆိုတာ မျိုးတွေလဲ အော်ကြပါတယ် ။ တပါတီ စနစ် - အလိုမရှိ .. အလိုမရှိ အော်နေကြပေမဲ့ တပါတီ စနစ်ကပဲ မကောင်းတာလား ၊ အာဏာရှင် စနစ်ကပဲ မကောင်းတာလား ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘာလဲ မသိကြသေးပါဘူး ။
ဟုတ်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်စားချေတဲ့ လူသတ်ပွဲတွေ ၊ တန်ပြန် သပိတ် ဆိုပြီး ဆန္ဒ ပြသူတွေကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် လာသူတွေကို ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင် တရား စီရင်တဲ့ လူသတ်ပွဲတွေ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတာတော့ ထည့်ပြော ရမှာပါ ။ မင်း ရှိနေလျက်နဲ့ အားကိုး မရလို့ ၊ မင်းကိုယ်တိုင်က မင်းဆိုး မင်းညစ် ဖြစ်နေလို့ ကိုယ့်တရားကိုယ်စီရင်ဖြစ်လာရတာေ
တွပါ ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတာတောင် လွတ်လပ်ရေး အရသာ မခံစားရပဲ အမျိုးသားချင်း ကျွန်လို ပြန် အုပ်ချုပ် ခံလာရတဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ မျိုသိပ် ခံစားလာရတဲ့ ၊ လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြမှုကို ဗလာချီ ပစ်သတ် ခံထားရတဲ့ လူတွေရဲ့မခံမရပ်နိုင် ပေါက်ကွဲမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ၊ လူထု အုံကြွမှု ပုံစံကနေ ရပ်ဆိုင်း လိုက်တာဟာ စစ်တပ်က ပစ်သတ် နှိမ်နှင်းလို့ ဆိုတာထက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြနေတဲ့ လိုအပ်ချက်ကို စစ်တပ်က လုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ မြှူဆွယ် မှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်း လိုက်တာလို့ ထင်ပါတယ် ၊ “တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာကိုချုပ်ကိုင်လိ
ုက်ပါပြီ ၊ ဆန္ဒပြပွဲ တွေရပ်ကြပါ ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထောင်ခွင့်ပေး
ပြီး ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီး လုပ်ပေးပါ့မယ် ၊ ပြီးရင် အနိုင်ရ ပါတီကို အာဏာလွှဲပေးပြီး စစ်တပ်က စစ်တန်းလျား ပြန်မှာပါ ”ဆိုတဲ့ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ရဲ့ ကတိ စကားကို ယုံစားမိခဲ့ကြလို့ လို့ထင်ပါတယ် ။
၁၉၈၉ မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ဖမ်း ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်း လုပ်ပြီး မဆလကနေ အမည်ပြောင်း တစည (တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ) အနိုင်ရအောင် နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစား ခဲ့ပေမဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှုက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီ (NLD) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ကိုပဲ ထူးထူးကဲကဲမဲပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ပြည်သူတွေ ဆန္ဒမဲ ပေးခဲ့ကြတဲ့ အနိုင်ရ ပါတီကို အာဏာ လွှဲမပေးပဲ ကတိတွေကို ချိုးဖေါက်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေက လူပြောင်း နာမည်ပြောင်း ကနေ့ထိ ဆက် အုပ်ချုပ် နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးကို အာဏာ သိမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး စောမောင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် တို့ကို ဖယ်ရှားပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေက န၀တ အမည်ကနေ နအဖ (နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ)လို့ ပြောင်းလဲ အုပ်ချုပ် နေခဲ့ပါတယ် ။